ချစ်သူထံ၊ သူငယ်ချင်းထံ၊ မိသားစုထံ ပြီးတော့ ကြိုးစားနေတဲ့သူများထံသို့.........
ချစ်ခင်သူများထံ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကို ပြောပြချင်လို့ ကျနော် စာတွေအများကြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။
"ပူး" - အသက် တနှစ်။ စာသယ်ပေးတဲ့ မျှားနတ်မောင်။ "ခအဲဒဲ့"လေးရဲ့ စာတွေကို သယ်ပေးရင်း သူမလေးကို တဖက်သတ် ချစ်နေမိသူ။
"ခအဲဒဲ့" - အသက် ၁၇နှစ်။ "ပူး"ရဲ့ တဖက်သတ်ချစ်သူ။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း တဖက်သတ် ချစ်မိနေသူ။ "ပူး"ကို သူမ မမြင်နိုင်ပါ။
"နစွတ်အို့" - "ယုကိ"လေးရဲ့ ချစ်သူ။ ဘယ်တော့ အဖြတ်ခံရမလဲလို့ သူငယ်ချင်းတွေက စိတ်ပူပန်ခံနေရသူ။
"ယုမိ" - အသက် ၃နှစ်။ ဆိတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီး ဆိတ်မလေး။ "နစွတ်အို့"နဲ့ ချစ်ကြိုက်နေဆဲ။
"မိုရှ" - စာတွေကို ဝါးစားတဲ့ဆိတ်။
"ဂုဖု" - "ဒိုမု"ရဲ့ သူငယ်ချင်း။
"ဒိုမု" - "ဂုဖု"ရဲ့ သူငယ်ချင်း။
"ဂျိမု" - ကြင်နာတတ်တဲ့ စတုရန်းပုံ မျှားနတ်မောင်။ "ပူး"ရဲ့ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက် သူငယ်ချင်း။
"ခအဲဒဲ့"ရဲ့ မေမေနဲ့ "ခအဲဒဲ့"ငယ်ငယ်က
"နင်နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ကတည်းက ဘာလုပ်လုပ် အတူတူ... အမြဲတမ်း သူငယ်ချင်းလို့ မှတ်ယူရင်း... စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ယူရင်း... ဒါပေမယ့် အဲဒီထက်ကို ငါ့ရင်ထဲမှာ ကြီးလာ~ ကြီးမားလာတယ်။ တွေးလိုက်တိုင်းလည်း ရင်ထဲမှာ တဖြည်းဖြည်း ကြီးမားလာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ နင်နဲ့ ခုလို သူငယ်ချင်းလို ရင်းနှီးပျော်ရွှင်နေရတာ ပျက်စီးသွားမှာ စိုးတာရယ်ကြောင့်.... ဒါပေမယ့်လေ နင်နဲ့ ရင်းနှီးလေ ရင်းနှီးလာလေလေ ငါရဲ့ စိတ်တွေကို ထိမ်းချုပ်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး.... ...ချစ်တယ် .... ချစ်တယ်။ .... အရမ်းချစ်တယ်"
ကျနော် ကောင်မလေးတွေနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တဲ့ နည်းထဲက အများဆုံးနည်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်၊ တော်တော်ကြာကြာ ခင်မင်လာပြီး အမြဲတမ်း အတူတူ အချိန်တွေက များလာပြီး မသိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ၂ယောက်လုံး တပြိုင်ထဲ စိတ်ထဲမှာ ချစ်သူရည်းစားလို ခံစားလာရတာမျိုးပါ။ ထမင်းအတူတူစား၊ ဈေးအတူတူဝယ်ရင်း အလိုလို kiss ပေးမိပြီး "အီယား~ ချစ်မိသွားပြီ!!"လို့ ကိုယ့်ဘာသာ သတိထားမိတဲ့အခါမှာ ရည်းစားတွေ ဖြစ်နေကြပြီလေ။
ဒါကြောင့်ပါလို့ ဆင်ခြေပေးတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျနော်က "ချစ်တယ်" "ပြန်ချစ်ပါ"လို့ ရိုးရိုးသားသား ဖွင့်ဟတဲ့ ရည်းစားစာ တခါမှ မရေးဖူးဘူး။ အဲဒီအစား ချစ်သူဆီကို ရည်ရွယ်တဲ့ ရည်းစားစာတွေ အများကြီး ရေးဖြစ်တယ်။ ကျနော့်အတွက် ရည်းစားစာဆိုတာ ချစ်သူကို ပေးတဲ့ စာမျိုးတွေပါ။
ဒါပေမယ့် ခုတခါတော့ ဒီစာအုပ်ကို ရေးရင်း စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ကို တွေးပြီး ရည်းစားစာတွေ အများကြီးရေးပြီး၊ တဖတ်သက် အချစ်နဲ့ ခံစားနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ရင်း ချစ်သဝဏ်လွှာရဲ့ အတွေးအမြင်က ပြောင်းသွားတယ်။
ဖွင့်ဟဝန်ခံစာ ချစ်သဝဏ်လွှာလည်း ကောင်းတာပါဘဲလေ...
ကျနော်က အချစ်ကဗျာ ကောင်းကောင်းမရေးတတ်ပေမယ့် "ချစ်တယ်"ဆိုတာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်လွယ်တဲ့ စကားလုံးသုံးပြီးပြောတာ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ပိုသေချာသွားတယ်။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါရေးပြီး မပေးဖြစ်တဲ့ ရည်းစားစာတွေ ဖြစ်လည်း ရတယ်၊ မင်းအကြောင်းတွေးပြီး မအိပ်နိုင်တဲ့ ညတွေကို ကုန်လွန်ခဲ့တယ်လို့ ခပ်ဆွေးဆွေး ရည်းစားစာဖြစ်လည်း ရပါတယ်။
ဒီလိုတွေးလိုက်ရင် အခုအချိန်အထိ ရှက်ပြီး မရေးရဲတဲ့ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ စကားလုံးတွေလည်း သုံးရဲလာမယ်လို့ တွေးမိတယ်လေ။
"တို့ တခါမှ မပို့ဖြစ်တဲ့ စာတွေ နင့်ဆီကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဖြစ်တာ သိလားဟင်?
ဘယ်တုန်းကများ ဒီစာတွေနဲ့ ဒီအံဆွဲထဲ အပြည့်ဖြစ်သွားတာပါလိမ့်။ ဒီစာတွေကို တံတားလုပ်ပြီး နင့်ဆီကို လာခဲ့မယ်ကွာ။
စာတွေနဲ့ ဖန်ဆင်းထားတဲ့ တံတားကို ဖြတ်သန်းရင်း...
ကြိမ်းသေ ပြည့်ဝရမယ်လို့ ကြယ်ကြွေကို ကြည့်လို့ ဆုတောင်းရင်း...
တို့ မင်းအိမ်ပြတင်းဝကို ဘယ်တော့များမှာ ခေါက်နိုင်မလဲ?
အိပ်မက်ထဲမှာတော့ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ date နေခဲ့ပေမယ့်လည်းလေ...."
Posted by မြရွက်ဝေ at 7:10 PM
ကျနော် ကောင်မလေးတွေနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တဲ့ နည်းထဲက အများဆုံးနည်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်၊ တော်တော်ကြာကြာ ခင်မင်လာပြီး အမြဲတမ်း အတူတူ အချိန်တွေက များလာပြီး မသိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ၂ယောက်လုံး တပြိုင်ထဲ စိတ်ထဲမှာ ချစ်သူရည်းစားလို ခံစားလာရတာမျိုးပါ။
ဖတ်ရတာ တမျိုးလေးပဲ.. အဆက်တွေ ဘာတွေများ ရှိသေးလား။
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ချစ်စရာလေျး